भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि – Suchana Hub
भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि
9 months ago सूचना हब संवाददाता: सरोज
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका क्षेत्रको समुदायस्तरमै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले मध्यपुर थिमिको वडा नं १, ३, ६, ७, ८ र ९ को समुदायस्तरमै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिइसकेको दावी गरेका छन ।
मध्यपुर थिमि नपा भक्तपुरका चार नपामध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमति भेटिएको स्थानीय तह हो । यहाँ शनिबारसम्ममा एक सय ५ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरले बताएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयले नै मध्यपुर थिमि नपाको वडा नं. १, ३, ६ र ८ मा समुदायस्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको जनाएको हो । मध्यपुर थिमि नपाका ९ वटै वडामा संक्रमित भेटिएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी वडा नं. ३ का संक्रमित रहेका छन् । यहाँका ३६ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । भक्तपुर काठमाडौं ६ लेन सडकअन्तर्गत मध्यपुर थिमिको गट्ठाघर र कौशलटार खण्ड वडा नं. ३ मा पर्छ ।
Previous कोरोनाको रोकथामका लागि डब्लूएचले ल्यायो यस्तो योजना…
Next चितवनका ४ नगरपालिकाले बनाए संयुक्त आइसोलेसन